एमाले शीर्षनेताहरु दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित
अध्यक्ष ओलीले दुई नम्बर प्रदेशका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने
Thursday, 14 Sep, 2017 4:24 PM
काठमाडौं, २९ भदौ । आगामी २०७४ असोज २ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन अभियानमा एमालेका शीर्षनेताहरु खटिएका छन् ।
निर्वाचनको प्रचार–प्रसारका क्रममा यतिबेला हाम्रो पार्टीको सिंगो नेतृत्व मूलतः प्रदेश नं. २ का आठ वटा जिल्लाहरुः सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा केन्द्रित हुने क्रम जारी रहेको एमालेले जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलि भदौ ३० गते जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका तथा बर्दिबास नगरपालिकालगायतका चुनावी सभाहरु र कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भोलि भदौ ३० गते बाराका विभिन्न स्थानीय तहका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भई नेतृत्व र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । पार्टी नेता माधवकुमार नेपाल प्रदेश नं. २ का विभिन्न जिल्लाहरुमा सक्रिय रहआउनुभएको छ । आफ्नो गृहजिल्ला रौतहटका साथै नेता नेपालले बारा, पर्सा, महोत्तरीलगायतका जिल्लाका चुनावी भेला, सभालाई सम्बोधन र उम्मेदवारहरुसँग घरदैलो पनि गरिरहनुभएको छ । उहाँले भोलि सिरहाको गोलबजार नगरपालिका लगायतमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र भीम रावल पनि यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका चुनावी कार्यक्रमहरुमा सरिक र सक्रिय हुनुहुन्छ ।
पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल मूलतः वीरगञ्ज महानगरपालिकामा बढी केन्द्रित हुँदै बारा र पर्साका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सक्रिय भएर अहिले महोत्तरीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ । उहाँ भोलि सिरहा र सप्तरीका कार्यक्रमहरुमा केन्द्रित रहनुहुनेछ । पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवाली भदौ २८ देखि सप्तरीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आजदेखि सिरहामा केन्द्रित हुनुभएको छ । पार्टी सचिव भीम आचार्य मूलतः सप्तरीमा केन्द्रित हुनुहुन्छ । पार्टी सचिव गोकर्ण विष्ट भदौ ३० गते सर्लाहीका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । पार्टी सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीका कार्यक्रमहरुमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुँदै भोलि सर्लाहीका नगरपालिकाकेन्द्रित चुनावी कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन गर्न पुग्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश नं. २ का संयोजक सत्यनारायण मण्डल एक महिनादेखि मधेसमै रहनु भएको छ । गृहजिल्ला सप्तरी रहेको हुनाले नेता मण्डलले त्यहीँका चुनावी अभियानमा नेतृत्व प्रदान गरिरहनुभएको छ । प्रदेश नं. २ का सहसंयोजक नागेन्द्र चौधरी विशेषगरी गृहजिल्ला पर्सा र बाराका चुनावी गतिविधिहरुमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
विभिन्न ८ वटा जिल्लामा पार्टी नेताहरुमा निम्नानुसार खटिरहनुभएको छ ः